तपाई समयमै सुते पनि अत्याधिक निन्द्रा लाग्ने गर्छ ? यसका कारण हटाउने उपाय - ज्ञानविज्ञान
तपाई समयमै सुते पनि अत्याधिक निन्द्रा लाग्ने गर्छ ? यसका कारण हटाउने उपाय
हामीलाई कहिलेकाहिँ एकदमै थकान महसुस भइरहने, सुतिरहन मन गर्ने, आँखा नै खोल्न नसक्ने गरी निन्द्रा लागिरहने हुन सक्छ । घरमा मात्र नभएर बाहिर जाँदा, कार्यालयमा काम गर्दै गर्दा छिट्टै थाक्ने, आलस्य हुने, तथा निन्द्रा लागिरहने हुन सक्छ ।
धेरै समय देखि काममा ब्यस्त रहेर निन्द्रा नपुगेको खण्डमा पनि हामीलाई धेरै निन्द्रा लाग्ने हुन सक्छ । हाम्रो शरीरमा पानी र अक्सिजनको मात्रामा कमि भएमा पनि एस्तो समस्या देखा पर्न सक्छ । यसको अर्को कारण भनेको एनिमिया अर्थात् रक्तअल्पता को समस्या हो ।
दैनिक खाने खानेकुरामा आइरन र भिटामिनको कमीको कारण हामीलाई एनिमिया हुने गर्छ । यसका साथै हाम्रो शरीरमा रातो रक्तकोषको कमी भएमा एनिमिया हुने गर्छ । रातो रक्तकोषले फोक्सोबाट शरीरभरि विभिन्न अंगहरुमा अक्सिजन पुर्याउने काम गर्छ ।
हाम्रो शरीरको विभिन्न अंगमा अक्सिजन पुग्न नसके हामीलाई कमजोर बनाएर अल्छि लाग्ने समस्या पैदा गर्न सक्छ । र, अत्यधिक निद्रा लाग्न सक्छ। हाम्रो शरीरमा अक्सिजन र रगतको मात्रा नपुगेकोले समय समयमा हामीलाई अत्याधिक रुपमा हाई आउने गर्छ ।
डिप्रेसन पनि धेरै सुत्नुको ठुलो कारण रहेको अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ । डिप्रेसनका कारण मानिसले आफूलाई निकै कमजोर महसुस गर्छ। उदासीनताको सिकार भएको कारण निन्द्राको समयमा मात्र तनाबमुक्त हुने भएको हुनाले यस्तो बेलामा मानिसहरु धेरै सुतेको गरेको हुन्छ ।
हामीले यस्तो समस्यालाई कदापी नजर अन्दाज गर्नु हुँदैन । यस्तो समयमा हामीले पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने गर्नु पर्छ । हामीले दिनहुँ २ लिटर वा सो भन्दा बेसी पानी पिउने गर्नु पर्छ । हामीले प्रशस्त मात्रामा प्रोटीनयुक्त खानामा खानु आवश्यक हुन्छ ।
त्यसैले बढी मात्रामा फलफूल, तरकारी एवं सलादको सेवन गर्नुपर्छ । प्रशस्त मात्रामा आइरनयुक्त खाना तथा मौसम अनुसारका फलफूलको सेवन गर्नाले शरीरमा थकाइ कम हुन्छ र हामीलाई निन्द्रा कम लहने गर्छ । यसका साथ साथै हामीले शाररिक ब्यायाम पनि गर्नु पर्छ ।
चिल्लो, पिरो, अमिलो जस्ता खानेकुरा खान कम गर्नुका साथै बाहिर खाने बानी लगाउनु हुदैन । यसका साथ साथै धुम्रपान, मदिरापान र खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थबाट आफुलाई टाढा राख्नु पर्छ । हामीले डाक्टरको सल्लाह नलिकन विभिन्न दुखाई कम गर्ने औषधिको पनि सेवन गर्नु हुदैन ।
के तपाई पर्याप्त निन्द्राबाट बञ्चित हुनुहुन्छ ? मध्यरातमा बिउँझेर चिन्तित मुद्रामा घडीको सुईले टिक–टिक गरेको हेरेर बस्नुभएको छ ? तपाईंलाई निन्द्रा पुगेको छैन?
अफिसमा छिर्नेबित्तिकै १० मिनेट यसो निदाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ? अवश्य पनि तपाईं एक्लै हुनुुहुन्न र आशा मरिसकेको छैन । हामी राम्रोसँग सुत्न चाहन्छौं, तथापि धेरैलाई गाह्रो हुन्छ ।
अपर्याप्त निद्राले मन अस्थिर बनाउछ र दैनिक गतिविधिमा नै असर गर्छ । अनिद्राका कारण थकान, एकाग्रताको अभाव, दिक्क लाग्ने, तनाब बढ्ने र दैनिक कार्य शैलीलाई नै असर गर्छ । ६ घन्टाभन्दा कम समय सुत्दा बढी भोक लाग्छ, जसले साढे सात गुणा मोटोपन ल्याउँछ ।
थोरै सुत्ने मानिसलाई पर्याप्त मात्रामा सुत्ने मानिसको तुलनामा साढे दुई गुना डायबिटिजको खतरा हुन्छ ।
पर्याप्त नसुत्दा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घट्छ । डिप्रेसन, डायबिटिज, मुटुसम्बन्धी रोग, डिमेन्सिया निम्त्याउँनुका साथै असामयिक मृत्युसमेत हुन सक्छ ।वास्तवमा सातामा दैनिक ४–५ घन्टा सुत्दा स्मरण क्षमता १ प्रतिशतले घट्छ ।
समग्रमा भन्नु पर्दा अनिद्राले जीवनको गुणस्तर घटाउछ । कम सुत्दा निरन्तर रुपमा स्नायु प्रणालीलाई कमजोर हुन्छ र उच्च रक्तचाप तथा हृदयाघातको सम्भावना बढाउँछ । जीवनमा कुनै न कुनै बेला हामीले अनिद्रा अनुभूति गरेकै हुन्छौं ।
थोरै सुत्ने मानिस बढी परिश्रमी हुने धेरैको विश्वास छ । तर त्यो वास्तविकता होइन । अनिद्रा परिश्रम र प्रतिबद्धताको नमुना होइन ।
के हो राम्रो निन्द्रा ?
लामो समय सुत्नु केही हदसम्म कमजोरीको लक्षण हो । तथापि उच्च गतिविधि गर्ने मानिसको स्वस्थ रुपमा सुत्ने आदत हुन्छ । पर्याप्त र गुणस्तरीय निन्द्राले तनाब हटाउँछ र दिमाग फूर्तिलो बनाउँछ ।
यसले उर्जा तह तीब्र पार्छ, स्मरणशक्ति बढाउँछ र नकारात्मक आवेग घटाउँछ । पर्याप्त निन्द्राले रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ र स्वस्थ सेल डिभिजनलाई प्रोत्साहन गर्छ ।
शारीरिक शक्ति बृद्धि गर्छ र दिमागको कार्यमा सुधार ल्याउँछ । निद्रा राम्रो भयो भने हाम्रो हर्मोन प्रणालीले राम्रो काम गर्छ । गुणस्तरीय निन्द्राले विद्यार्थी वा धावकको प्रस्तुतिलाई प्रभाव पार्छ । उदाहरणका लागि चितुवालाई लिन सकिन्छ । चितवा प्रतिघन्टा ६० माईलको दूरीमा दौडन्छ ।
तर यो दैनिक १८ घन्टा सुत्छ । अन्तर्राष्टिय कम्पनी जस्तै बेन एन्ड जेरी, दी हफिङटन पोस्ट, जापोसले सुताईको महत्व राम्रोसंग बुझेका छन् । त्यही भएर तिनले आफ्ना कामदारलाई आराम गर्न कार्यालयमै सुत्ने कोठा व्यबस्था गरेका हुन्छन् ।
निदाउँने –बिउझाने चक्र
दिमागमा हुने एउटा प्राकृतिक हर्मोन मेलाटोनिनले हाम्रो निन्द्रा तथा व्युँझने प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्छ । जब रात पर्छ शरीरले मेलाटोनिन निस्कासन गर्छ । त्यसपछि बेडमा पल्टिन मन लाग्छ ।
स्मार्टफोन, ल्यापटप, कम्प्युटर, टिभी स्कृनबाट आउने कृत्रिम प्रकाशले मेलाटोनिन उत्पादन घटाउँछ र सुत्ने तथा व्युँझने शैलीलाई असर गर्छ । त्यसैले सुत्नुएकघन्टा अघि इमेल, समाचार या फिल्म हेर्नु हुँदैन । सिरानीनजिकै मोबाईल राख्दा पनि निन्द्रा बिथोलिन्छ ।
कतिबेर सुत्ने ?
दैनिक कति घन्टा सुत्ने भन्ने बारेमा त्यस्तो कडा नियम छैन । उमेरअनुसार पनि शरीरले निन्द्रा माग गर्छ । बयस्कका लागि दैनिक सात–आठ घन्टा सुत्नुपर्छ । बालबालिकाका लागि त्यो भन्दा धेरै । तर वृद्धवृद्धा अलि थोरै समय सुत्छन् ।
के गर्ने, के नगर्ने
परिणामभन्दा गुणस्तर बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । गहिरो निन्द्रा छैन भने नौ दश घन्टा सुत्दा पनि थकान महसुस हुन्छ । सुताइलाई दुई तरिकाले विभाजन गर्न सकिन्छ ।
शान्त निन्द्रा र गहिरो सक्रीय निन्द्रा । गहिरो निन्द्राले कुनै जटिल समस्या आउँदा सामना गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
डिनर समयमा चिल्लो खानेकुरा खाँदा स्थिर उर्जा प्राप्त हुन्छ र मिठो निन्द्रा लाग्छ । रातीमा माछा खाँदा सेरोटोनिन उत्पादन गर्छ जसले खुसीको भावना बढाउँछ, स्ट्रेस हर्मोन घटाउँछ । कार्बनडाईअक्साईयुक्त खानेकुराले ब्लड सुगरमा उथलपुथल ल्याउँछ र निन्द्रामा असर गर्छ ।
प्रोटिनयुक्त खानेकुरामा पाईने एमिनो एसिडले सहज सुत्न मद्दत गर्छ । जबकि मदिराले निदाउन सहयोग पुर्याउछ, तर गहिरो निन्द्रा लाग्दैन । निन्द्रा नलाग्नेले साँझ कफी खानु हूदैन ।
न्यानो पानीको सावर, ध्यान, शान्त बनाउने संगीत, हल्का चिसो तापक्रमयुक्त कोठा (६८ डिग्री फरेनाईट), तथा बेडमा जानुअघि पूर्ण रुपमा कोठामा पर्दा लगाएर सुत्दा राम्रो निन्द्रा लाग्छ । ल्याभेन्डरको बासना कोठामा छर्दा पनि निन्द्रालाई सहयोग पुर्याउँछ । यसले रक्तचाप र छालाको तापक्रम घटाउँछ ।
बेडलाई राती सुत्न मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । बेडमा बसेर टेलिभिजन हेर्ने , खाने इत्यादि गर्नुहुन्न । दिउँसो सुत्नु हुन्न । नियमित व्यायाम गर्नुपर्छ ।
कामको प्रस्तुति, स्वास्थ्य, आवेगलाई नियन्त्रण गर्न तथा स्वास्थ्यसम्बन्ध कायम गर्न उच्च गुणस्तरको निन्द्रा आवश्यक पर्छ । बस्दाबस्दै निदाउँने वा छोटो समयमा नै निन्द्रा लाग्छ भने तपाईं स्वस्थ हुनुहुन्छ ।
कुन खानाले निन्द्रा भगाउछ कुनले जगाउछ ? पढ्नुहोस्
१. निन्द्रा जगाउने : केरा
केरा स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ । तनावको बेलामा केरा खानुस् यसमा पाइने पोटासियमले तनाव कम गर्न मद्दत गर्छ । यसमा पाइने म्याग्नेसियमले मांसपेसीलाई आराम दिन्छ । त्यतिमात्रै नभई केरामा पाइने कार्वोहाइड्रेटले तपाईँलाई मिठो निन्द्राको दुनियामा लैजान मद्दत गर्छ ।
२. निन्द्रा भगाउने : चिकेन/पनिर करी
चिकेन/पनिर करीमा प्रसस्त मात्रामा क्यालोरी हुने हुँदा यसले तपाईँलाई निन्द्रा लाग्न दिदैन र गहिरो निन्द्राबाट टाढा राख्छ । त्यसैले सुत्नु अगाडि चिकेन÷पनिर करी खान कम गर्नुस् ।
३. निन्द्रा जगाउने : भेजिटेबल सुप (सब्जीको झोल)
सब्जीको झोल तथा त्यसमा भएको नरम सब्जीका टुक्राहरु पचाउन सजिलो हुने हुँदा तपाईँको पाचन प्रक्रियालाई ओभर टाइम काम गर्न पर्दैन । यसले तपाईँलाई मिठो र गहिरो निन्द्रा लाग्न मद्दत गर्छ ।
४. निन्द्रा भगाउने : ग्रिन टी
तपाईँ अचम्मित हुनुभयो होला तपाईँले सधैभरी स्वस्थ मानेको ग्रिन टीलाई निन्द्रा भगाउने पदार्थ भित्र राख्दा तर बास्तविकता त्यहि हो । पोषण विशेषज्ञका अनुसार ग्रिन टी दिउसोमा पिउन एकदमै लाभदायक हुन्छ । तर त्यही ग्रिन टी रातिमा पिउनुभयो भने त्यसमा हुने क्याफेइनेल तपाईँको निन्द्रा भगाउने काम गर्छ ।
५. निन्द्रा जगाउने : दूध
गाउँघरतिर सुत्नु अघि एक गिलास दूध पिउने चलन हुन्छ, किनभने दुधले निन्द्रा जगाउने काम गर्छ । दूधमा पाइने एमिनो एसिड ट्रिप्टो फ्यानले सेरोटोनिन भनिने मस्तिष्कको रसायनलाई क्रियाशिल गरी निद्रा लगाउन मद्दत गर्छ ।
६. निन्द्रा भगाउने : वाइन
अध्ययनहरुले वाइन पिउनु मुटुको लागि राम्रो देखाएका छन् तर निन्द्राको दृष्टिकोणले हेर्दा भने वाइनले निन्द्रा भगाउने काम गर्छ । त्यसैले मिठो निन्द्रा चाहनु हुन्छ भने सुत्नुअघि वाइन नपिउनु होला ।
७. निन्द्रा जगाउने : भात/चामल
भात अथवा चामललाई तौल बढाउने खानाको रुपमा लिइन्छ तर पोषण विशेषज्ञहरुले भने ठिक्क मात्रामा खानु फाइदाजनक हुने बताउछन् । भात हल्का हुने भएकोले आफ्नो शरीरलाई चाहिने हिसाबले खाएमा त्यसले लाभ पुरयाउने बताउछन् । यतिमात्रै नभई मिठो निन्द्रा लगाउन पनि मद्दत गर्छ ।
८. निन्द्रा भगाउने : डार्क चकलेट / कफि
डार्क चकलेट खानु तथा कफि पिउनु स्वस्थ्यको लागि फाइदाजनक नै हुन्छ । तर याद गर्नुस् सुत्नु अगाडि चकलेट खाने र कफि पिउने गर्नुभयो भने यसमा प्रसस्त मात्रामा पाइने क्याफेन नामक रसायनले तपाईँलाई निन्द्रा लाग्न दिनेछैन ।
Don't Miss it स्वादिलो र रसिलो हुने मौसमअनुकूल फल आरुवखडा खाँदाका फाइदा
Up Next तपाईको मुस्कुराउने बानी छ कि छैन ? छैन भने अब मुस्कान छर्नुस, स्वस्थ रहनुस
यस्ता छन्, सोयाबीन चाट बनाउने तरिका
सामग्री सोयाबीन (उमालिएको) २५० ग्राम कालो चना (उमालिएको) १०० ग्राम प्याज ७५ ग्राम गोलभेंडा ९० ग्राम उमालेको आलु १०० ग्राम…
कोलेस्ट्रोल भन्नासाथ धेरैको मुटु काम्न थाल्छ । मुटु काम्नु भनेकै मुटु सम्बन्धी समस्या हुनु हो । शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा धेरै…
महिलाहरुले स्वास्थ्य शरीरका लागि अपनाउनुस यी टिप्स
आफ्नै स्वास्थ्यमा ध्यान दिन नसक्दा बिरामी महिला बढिरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले आफू स्वस्थ रहनका लागि यी महत्वपूर्ण…
यस्ता छन् आँखा सम्बन्धी राेचक तथ्यहरू, जान्नुहोस्
१. एक स्वस्थ मानिस प्रतिमिनेट औषत १७ पटक आँखा झिम्काउँछ । यो गणनाको आधारमा १ दिनमा करीब १६ हजार पटक…
नियमित पिउनुस् धनियाँको पानी, फाइदै फाइदा
धनियाँलाई स्वादका लागि प्रयोग गरिन्छ । तर, धनियाँले जिब्रोलाई स्वाद दिने मात्र नभई विभिन्न रोगबाट पनि बचाउने काम गर्छ ।…
शरीरले कुन रोगको संकेत कसरी गर्छ ? स्वास्थ्यका यी आधारभूत कुरालाई हामीले बुझ्नैपर्छ ।
शरीरको रचना अद्भूत छ । शरीरको भाषालाई बुझ्न सकियो भने हामी संभावित थुप्रै किसिमको रोगबाट बच्न सकिन्छ । किनभने शरीरले…